I-Sedona Guest House ene-VIEWS
375 okushiwo abanye
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Paul And Jenna
U-Paul And Jenna Ungumbungazi ovelele
I-Sedona Guest House, esanda kwakhiwa ngo-2018, itholakala kalula eWest Sedona emgwaqweni onokuthula onokubukwa okuhle. Kuyizindlela eziseduze nebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezimakethe, ikhofi, amatiyetha amamuvi, izindawo zokudlela nokunye. Indawo ekahle yokujabulela iSedona! Kungokwesimanjemanje, kuyimfihlo futhi kuvumelana nemvelo ngezinsiza zemvelo. Sihlala endaweni endlini enkulu nezingane zethu ezimbili ngakho oyedwa wethu uvame ukutholakala ukuze asize nganoma yiziphi izidingo eziphakamayo noma anikeze amathiphu awusizo ukuthuthukisa ukuhlala kwakho!
I-Sedona Guest House yethu enhle esanda kwakhiwa isenkabeni ye-Sedona. Uphahla lwangaphakathi oluphakeme kanye neminyango yengilazi eshelelayo emide inikeza ukubukwa okumangalisayo kwamadwala abomvu. Ingamamitha-skwele angu-505 futhi ilula, iyakhanya, yesimanjemanje, futhi iyimfihlo. I-Wifi, i-DVD, ikhebula le-Smart TV/NO, i-W/D, ikhofi eliphilayo, izinto zangasese nokunye.
Ikamelo lokulala linombhede wendlovukazi kanye nesihlalo esihle sokufunda eduze kwefasitela. Indawo yokuhlala eyinhloko inosofa we-IKEA we-chaise owengeziwe (odonsayo ukuze ube yindlovukazi) kanye nekhishi elihlome ngokuphelele elihlinzeka ngamanzi ahlungiwe e-osmosis.
Amalineni ayimvelo futhi sisebenzisa kuphela imikhiqizo engenabo ubuthi, yokuhlanza yemvelo kanye nesiwashi elondolo. Kukhona iwasha nesomisi ozoyisebenzisa kanye nendawo yokugcina yangaphandle (engamboziwe) yamabhayisikili akho noma amanye amagiya. Kukhona nesihlanzi somoya esingahlala sivuliwe noma sivalwe uma uthanda.
Ngaphezu kwalokho ungabhukha amamassage e-en-suite, njengoba u-Paul engumuntu omangalisayo we-massage therapist oneminyaka engaphezu kwe-15 yesipiliyoni. Ikakhulukazi usebenza endaweni ye-spa yasendaweni, nokho unikeza izivakashi zethu ukutholakala okuthile ngenani elikhethekile! Noma uma uthanda angakuhlelela isaphulelo endaweni ye-spa asebenza kuyo--Sedona Spa e-Los Abrigados. I-spa inechibi elishisayo elingaphandle, ubhavu oshisayo, i-sauna, igumbi lesitimu, igumbi lokuzilolonga, namakilasi okuqina. Siyakwazi futhi ukuthola amaphasi esaphulelo ukuze izivakashi zethu zisebenzise izinsiza ze-spa (ngaphandle kokubhuka ukwelashwa).
I-patio yangasese iyindawo ekahle yokubingelela ilanga eliphumayo futhi ubuke usebe lukhanya nokushona kwelanga. Futhi kuyindawo enhle yokujabulela ukukhanya kwenyanga kwamadwala abomvu!
4.98 ·375 okushiwo abanye
4.98 · 375 okushiwo abanye
I-Sedona Guest House isendaweni emaphakathi amabhulokhi angu-2 ukusuka ku-Hwy 89A eduze ne-Crimson View Subdivision. Indawo ithule futhi indlu ilungele imibhangqwana, imindeni, kanye nabahamba bodwa. Uphahla oluphezulu kanye neminyango yengilazi eshelelayo ephakeme inikeza ukubukwa okumangalisayo kwamadwala abomvu enyakatho nasempumalanga. I-Trailheads iqala imayela elingu-1 ukuya kwangu-2 ukusuka endlini, kuyilapho izitolo, izindawo zokudlela, amatiyetha wamamuvi kanye nehhovisi kukude ngamabhulokhi angu-2.
Ibungazwe ngu-Paul And Jenna
Sikuhlonipha ngokuphelele ubumfihlo bakho. Sizokunikeza sonke isikhala osithandayo kodwa sesihlale e-Sedona iminyaka engaphezu kwe-13 futhi futhi siyakujabulela ukwabelana ngeziphakamiso zemizila, izindawo zokudlela, noma olunye ulwazi mayelana ne-Sedona. Sihlala esakhiweni esisendlini enkulu nezingane zethu ezi-2, ngakho-ke siseduze futhi sitholakala nganoma imiphi imibuzo noma izidingo. Vele usazise!
Sikuhlonipha ngokuphelele ubumfihlo bakho. Sizokunikeza sonke isikhala osithandayo kodwa sesihlale e-Sedona iminyaka engaphezu kwe-13 futhi futhi siyakujabulela ukwabelana ngezipha…
UPaul And Jenna Ungumbungazi ovelele